Addi Bilisummaa Ummata Tigraay Woyyaaneen karaa hundaan ibiddaan marfameera jedha, barreeffamni miidiyaa jaraa Horn Affairs – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAddi Bilisummaa Ummata Tigraay Woyyaaneen karaa hundaan ibiddaan marfameera jedha, barreeffamni miidiyaa jaraa Horn Affairs
Addi Bilisummaa Ummata Tigraay Woyyaaneen karaa hundaan ibiddaan marfameera jedha, barreeffamni miidiyaa jaraa Horn Affairs
Addi Bilisummaa Ummata Tigraay Woyyaaneen karaa hundaan ibiddaan marfameera jedha, barreeffamni miidiyaa jaraa Horn Affairs jedhamurratti Tigiriffaan dhihaate tokko.
Barreeffamni nama Gared Yinebeb jedhamuun kaleessa dhihaate kun bal’aa yoo tahu yaadni isaa cuunfaatti kan armaan gadii kana. Barreessichi keessa-beekessa dhaabichaa ti. Woyyaaneen akka daabboo ayyaanaatti irraa fi jalaan ibiddi itti qabateera kan jedhu barruun kun, rakkoon kunis erga Dr. Abiyyi Ahmed MM tahee filamee booda kan hammaataa deemaa jiru tahuu addeessa. Rakkoon kun karaa gurguddaa lamaan (keessaa fi alaan) kan mulataa jiru tahuu tarrisa.
Kan duraa rakkoo TPLF ADWUI keessatti mudatedha jedha. ADWUIn erga aangoo qabatee hanga har’aatti Daandii Dimokraasii Woyyaanummaa (ወያናይ ዲሞክራሲ መስመር) kan jedhamuun taliigamaa ture. Erga Mallas du’ee booda hoggansa waloo (collective leadership)dhaan bulchaa kan ture ADWUIn amma erga MM haaraan dhufee booda aadaan sun hafee qajeelfamni adda addummaa qabu hoggana irraa dhihaachuu argaa jirra jedha. Kunis Daandiin Dimokraasii Woyyaanummaa fudhatama dhabuu irraa dhufe jechuun jala mura. Daandiin wayyaanummaa kun gara daandii Neo-Liberalismitti cehaa jira fakkaata kan jedhu barrichi, jijjiiramni akkasii kun Wayyaaneedhaaf du’a guddaa dha jedha.
Kana irraa ka’uun qondaalonni Wayyaanee gurguddoon walgahii dhaabichaa kan torbaanota muraasa dura Maqalee keessatti geggeeffame irratti ejjennoo isaanii ibsanii turan jedha. Haaluma kanaan Qabsaayaa Abbaay Tsahaayyee yeroo dubbatu “ወያናይ ዲሞክራሲ መስመር jechuun biyyattiif bu’aa qorannoodhaan mirkanaahe kan fide waan taheef daandiin kanarraa ala tahe gonkumaa waan hin yaadamne” jedhe. Qabsaayaa Siyyum Masfin gama isaatiin, “ወያናይ ዲሞክራሲ መስመር dhugoomsuuf lubbuu gabbarree qabsoo ummataatiin finne. Akkasumatti kan dhufe miti waan taheef osoma callifnee teenyee laalluu kan jijjiiramuu miti” jechuun dubbate.
Jarri kun akkas haa jedhan malee, karaan Woyyaaneen ittiin biyya bulchaa ture namootuma harka Wayyaanee keessatti guddatanii sadarkaa kana gahaniin micciiramee gara farra dantaa Woyyaaneetti jijjiiramaa jira jechuun barruun kun yaaddoo isaa ibsa. Hoggansi haaraan (MM) abbaa barbaade maqaa yakkee aangoo irraa ari’aa jiraachuunis tarkaanfii ajjeechaa daandii dimokraasii Wayyaaneeti jedha.
Gama biraan rakkoon Wayyaanee muddee jiru rakkoo keessoo TPLF tahuu isaa saaxila. Dhaabni Wayyaanee walgahii guyyaa 37f Maqalee keessatti taa’een homaa walii galteerra gahuu akka hanqatee jijjiirraa hogganoota naannichaa irratti godheen adeemsa faallaa heeraa hordofuun caalaattuu dhaabicha owwaaluuf deemaa jira jedha. TPLF dhaaba ummataaf dhaabate haa jedhamu malee namoonni inni hoggansa irratti muude akka dhaabichi ummata Tigraay waliin wal dhabu godhee jira jedha.
Kana malees TPLF keessatti walumaan wal kuffisuuf deemsi mul’ataa jiru yaaddessaa tahuu ibsa, barreeffamni kun. Firooma, dantaa fi naannummaadhaan aangootti wal fiduu fi maqaa wal yakkanii aangoo irraa wal ariyun bal’inaan mul’ataa jiraachuu saaxila. Gama biraan ammoo mootummoonni alaa keessattuu Ameerikaan karaa Donald Yamamototiin araara Ethio- Eritrea dhugoomsina kan jedhuun yaada Ertiraan dhiheeffatte fudhatee hojiirra oolchuuf kan socho’aa jiruu fi kunis TPLF irratti dhiibbaa guddaa akka qabu akeeka. Barruun kun yeroo yaada isaa xumuru akkas jedha:
”TPLF akkuma amala isaa ibidda karaa hundaan itti qabate kana keessatti akka warqee qoramee cululuqee baha moo akka shaamaa ibidda buutee baqee dhabama tahuuf jira? Yeroon nu garsiisuuf jira.”
Kana irratti xiinxala koo, gabaabinatti:
Wanni barruu kana keessatti calaqqise irra hedduun dhugaa fakkaata. Qondaaltonni TPLF gurguddaan adeemsa amma jiru kana maqsuuf jecha lafa jala wayitti jiraachuu jaraa waan keessa-beekessi jaraa jedhu kana irraa ni hubanna. Daandiin ወያናይ ዲሞክራሲ መስመር jedhamu dhugumatti jijjiiramaa jiraachuu argina, hanga nu barbaannuun tahuu baatus. Jalqabbiin mul’atu tokko jiraachuu isaa yaada jaraa kanatu ragaa nuu baha. Kun ammoo bu’aa qabsoo ummata keenyaati. Bu’aa kana tikfachaa kan hafeef falmaa jabeessuun qooda keenya taha. Jarris gama jaraatiin bakka duriitti of deebisuuf rafanii hin bulani. Kanas haasaa Abbaay Tsahaayyee fi Siyyum Masfin walgahii Maqalee irratti dubbatan irraa mirkaneeffachuun salphaa dha.
By Yaya Beshir
Maqaa hidhamtoota Oromoo mana hidhaa Qaallittii fi Qilinxoo jiran muraasa. Ammaf maqaan namoota 177 nu qaqqabe isaan kanadha